Greenhouse girazi Vagadziri & vanotengesa - China Greenhouse girazi Fekitori
Horticultural Girazi ndiro giredhi rakadzikira kwazvo regirazi rakagadzirwa uye nekudaro ndiro rakaderera mutengo girazi rinowanikwa. Nekuda kweizvozvo, kusiyana negirazi rinoyangarara, unogona kuwana mamaki kana mabhureki mugirazi rekurima, risingakanganise kushandiswa kwaro kukuru sekupenya mukati megreenhouse.
Inongowanikwa mu3mm gobvu regirazi mapaneru, horticultural girazi inodhura pane yakanamatira girazi, asi ichapwanya zvirinyore - uye kana girazi rekurima rinotsemuka rinopwanya kuita rakapinza girazi. Nekudaro iwe unokwanisa kucheka horticultural girazi kune saizi - zvakasiyana negirazi rakabatidzwa risingagone kuchekwa uye rinofanira kutengwa mune chaiwo mapaneru kuti akwane zvauri kupenya.
4mm Toughened Girazi YeAluminium Greenhouse Uye Bindu Imba
Girazi rinopararira rinotarisana nekugadzira chakanakisa mwenje kutapurirana uye kuparadzira mwenje unopinda mugreenhouse. … Kupararira kwechiedza kunovimbisa kuti mwenje unosvika pakadzika muchirimwa, ichivhenekera nzvimbo yakakura yemashizha uye ichibvumira kuti photosynthesis iitike.
Yakaderera Simbi Yakarongedzwa Girazi Ine 50% Haze
Yakaderera Simbi Yakarongedzwa Girazi Ine 70% Haze Mhando
Edge Basa: Kurerutsa pamucheto, yakati sandara kumucheto kana C-kumucheto
Gobvu: 4mm kana 5mm